Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq ayaa la xaqiijiyey in uu maanta ku geeriyooday magaalada London.
LONDON, UK - Alle ha u naxariistee waxaa maanta magaalada London ku geeriyooday Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo kamid ahaa falanqeeyayaasha kubadda cagta ee laanta Af-Soomaaliga ee BBC.
Maxaan ka naqaannaa rugcaddaaga?
"Kooxda Batroolka ayaa markii ay xirfaddiisa sare aragtay kasoo qaadatay gobolka Hiiraan. Runtii waan isla ciyaarnay aniga iyo asaga, waxaana ka wada dheeli jirnay xagga weerarka," ayuu yiri Mukhtaar Cuti.
"Hal isbuuc ka hor ayaan wada hadleynay, wixii ka dambeeyay lalama hadli karin, waayo aad buu u xanuunsanaa, Alle ha u naxariisto, haddaan nahay bahda ciyaaraha ee Soomaaliya maanta waxaa naga baxay nin qaali ah, waana uga tacsiyeynayaa dhammaan umadda Soomaalida", ayuu yiri.
Maxaa ugu dambeeyay wararka saameynta Coronavirus?
Dowladda oo fariin u dirtay muwaadiniinta ka imaaneysa 14 dal
Soomaliya 21.03.2020. 17:30
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay shaacisay talaabo ay ka qaadeyso muwaadiniintaas.
Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya oo ay kusoo korortay 29
Soomaliya 19.04.2020. 21:30
Farmaajo iyo Khayre oo hadalo is-burinaya ka yiri xakameynta Covid-19
Soomaliya 17.04.2020. 18:30